Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadda iyo ururka dhalainyarada OYSU – Finland iyo Amnesty International oo kulmay
Jaaliyadda iyo ururka dhalainyarada OYSU – Finland iyo Amnesty International oo kulmay
Posted by ONA Admin	/ April 20, 2012
Waxaa maanta oo ay taarikhdu aheyd 19.04 kulmay maamulka jaaliyada soomaalida Ogadeniya iyo ururka ardeyda iyo dhalinyarada Ogadenya ee wadanka Finland (OYSU – Finland) iyo ururka caalamiga ah ee u dooda xuquuqul insaanka ee Amnesty International.
Kullankan ayaa ka dhacay xafiiska ururka Amnesty International uu ku leeyahay magaalada Helsinki ee wadanka Finland.
Ajendayaasha kullanka ayaa ahaa xog-is-dhaafsi ku saabsan xuquuqul insaanka Ogadenya iyo sidii Amnesty iyo OYSU ay isaga kaashan lahaayeen abaabulka kullan weyn oo ay isugu yimaadaan siyaasiyiin, suxufiyiin, xubno kamid ah baarlaamanka Finland, jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka Finland iyo aqoonyahano xiiseeya qadiyada Ogadenya.
Ururka OYSU ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabka ay ayagu u rabaan in kullankaas loo qaban-qaabiyo ama uu u dhaco. Ururka Amnesty ayaa asagu dhankiisa soo dhaweeyay dareenka iyo fikradaha ay OYSU soo jeediyeen.
“Waxaan rabnaa inaan u gudbino siyaasiyiinta iyo saxaafadda wadanka Finland xad-gudubyada qarsoon ee joogtada ah ee ka jira Ogadenya “ayuu yiri Xog-hayaha Ururka OYSU – Finland mudane Cabdi Cali.
Amnesty International Finland ayaa goobta ka sheegtay inuu san caalamku si fiican ula soconin ariamaha Ogadeniya, laakiin arintii xidhitaankii labada weriye ee u dhashay wadanka Sweden ee lagu xidhay Ethiopia ay indhaha caalamka ku soo weecisay Ogadenya, taas oo ay ka soo baxeen su`aallo ay kamid yihiin “maxay Ethiopia u diidan tahay in Ogadenya ay tagaan weriye-yaal madax banaan?”.
Ururka OYSU ayaa qeexay in Ethiopia aysan ogoleyn in Ogadenya ay tagaan saxaafadda caalamka ee xorta ah, sababtuna ay tahay iney caalamka ka qarineyso xad-gudubyada iyo cadaadiska ka jira Ogadenya. OYSU – Finland ayaa balan-qaaday in Amnesty uu u soo gudbin doono xad-gudubyadii ugu danbeeyay ee ka dhacay Ogadenya oo qoraal ah, taas oo ururka Amnesty uu aad u soo dhaweeyay.
Ururka u dooda xuquuqul Insaanka ee Amnesty International ayaa balan-qaaday inuu ka caawin doono OYSU iyo jaaliyadda soomaalida Ogadenya ee wadanka Finland sidii loo qaban-qaabin lahaa kullan weyn oo ay ka soo qeyb-galaan dad miisaan ku leh hogaaminta siyaasadda ee wadanka Finland iyo sidoo kale saxaafadda, kaas oo looga hadli doono siyaasadda iyo xuquuqul insaanka Ogadenya.
Kullankan ayaa ku dhamaaday jawi wanaagsan iyo is-afgarad, waxaana labada dhinac ay ku balameen inuu sii socdo xiriirka OYSU – Finlandi yo ururka Amnesty International.
Youn Oysu says:
Manshaa allaah aad iyo aad ayaan u faraxsanahay kulankan qaaliga ah ee dhex maray Oysu-Finland iyo Amnesty International-Finaland. Waxaan halkan ka soo dhaweynayaa hamabalyo aan u dirayaa xidhiidh qiimahaleh ee u dhaxeeya labada urur. Taas oo hirgalinnysa ama fudaynaysa dadka finland ku nool in ay ogaadaan dhibaatada Ogadeniya ka socota.
Mahadcelin kale waxaa mudan webka ONA!